Previous Article Ịgụ Akwụkwọ N'efu Ga Aga N'iru na Steeti Imo
Gọvanọ Okorocha kwuru na atụmatu a ga-eri ihe ruru nde dọla 500. Ọ gbakwụnyere na gọọmenti ya ga-etinye otu nde dọla maka ịmalite atụmatụ a.
Gọọmenti Steeti Imo chọrọ ime ka Uguta Lake bụrụ ọka ibe n’ogige ebe njem nlegharị anya n’Afrịka gburu gburu. Maka nke a, gọọmenti Imo na otu na-ahụ maka imepute ihe ejije, nke a kpọrọ Actors Guild of Nigeria (AGN), ebinyego aka n’akwukwọ maka ime Uguta Lake ebe a ga n’emepute ihe ejije. Aka na-achị Imo, bụ Rochas Okorocha, gwara ndị nta akụkọ maka atụmatụ a mgbe ya na ndị a ma ama n’imepute ihe ejije na Nollywood gara njem nchọpụta n’ogige Oguta Lake.
Rochas Okorocha kwuru na gọọmenti ya ga-ebuga ngalaba na-ahụ maka omenaala na njem nlegharị anya, bụ State Ministry of Culture and Tourism, n’Uguta Lake. Gọọmenti ga-ewu ụlọ ọgbara ọhụrụ ole n’ole ya na akarangwa ndị e ji emepute ihe ejije n’Uguta Lake. Nke a ga-enye aka ime ka atụmatụ a biri ọkụ n’oge na-adịghị anya.
<Gọvanọ Okorocha kwuru na atụmatu a ga-eri ihe ruru nde dọla 500. Ọ gbakwụnyere na gọọmenti ya ga-etinye otu nde dọla maka ịmalite atụmatụ a. Gọọmenti ga-azụta ụgbọmmiri ọgbara ọhụrụ 10 maka ịkwalite njem ụgbọmmiri n’Uguta Lake.
Otu nwanyị a ma ama maka imepute ihe ejije, bụ Patience Ozokwo, kelere Gọvanọ Okorocha maka itinye imepute ihe ejije n’atụmatụ ịkwalite njem nlegharị anya na Steeti Imo. Patience kpọrọ oku ka gọọmenti steeti ndị ọzọ ñomie atụmatụ a. Nkem Owoh, onye a ma ama dịka “Ọsụ Ọfia”, maka imepute ihe ejije n’akpa ọchị, kwuru na atụmatụ a ga-akwalite ọnọdụ imepute ihe ejije na Nigeria.